News - Site na mmepe nke teknụzụ CNC na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ CNC nke China ji nwayọọ nwayọọ banye mgbanwe
Na-aga n'ihu mmepe nke CNC technology, China si CNC ígwè ụlọ ọrụ nwere nke nta nke nta banyere mgbanwe
Na diversification nke ahịa na-achọ na-aga n'ihu mmepe nke CNC technology, China si CNC ígwè ụlọ ọrụ ka nke nta nke nta banyere oge dị mkpa nke mgbanwe-otutu echiche, mgbanwe na ọkọnọ na ina ahịa, ngwaahịa update ọsọ na akụkụ ndị ọzọ na-achọ ime ka a mgbanwe dị egwu. Ihe ịrịba ama nke ihe a niile na-egosi na ọhụụ ọhụrụ na-abịa.
Dị ka anyị niile maara, Guangdong bụ otu n'ime ụlọ ọrụ CNC kachasị ukwuu na mba na mba ụwa. Dị ndị ahụ gụnyere igwe ọkụ na-enwu ọkụ, CNC punching igwe, CNC waya ịchacha igwe, ebe ndị na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị ọzọ. Otú ọ dị, n'ihi obere ihe mgbochi ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-emepụta obere Obere ogbako na-agwakọta. Iji zọọ ahịa, ọtụtụ ndị na-emepụta igwe Guangdong CNC na-agba izu ibe ha, mana ha na-eleghara ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-emepụta igwe CNC na mpaghara ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ ọnụọgụ nke ndị na-emepụta igwe CNC na Guangdong bụ ihe na-adịghị ahụ anya. Jinan na Shandong, Anhui na Nanjing, na Beijing na Hebei Mpụta nke ndị na-emepụta igwe na-achịkwa ọnụọgụ ọnụọgụ na mpaghara ahụ ejidewo ndị na-emepụta igwe na-achịkwa Guangdong na mberede. Ma ka mba ndị mepere emepe na Europe na America laghachiri n'ichepụta ihe, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị nrụrịta mpi ga-apụta.
Echiche ohuru ohuru na mmelite ngwa ngwa bu ihe di nkpa maka mmepe ulo oru ogologo oge. Agbanyeghị, nke a chọrọ nkwado dị ike na nkwado ego. Machinlọ ọrụ ígwè ọrụ CNC nwere akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ iri afọ site na mmalite ya ruo ntozu okè. Ahịa ugbu a na ndị ahịa na-arụ ọrụ arụmọrụ na ntụkwasị obi dị mma nwere ihe ndị dị elu achọrọ, ọ bụghị naanị na enwere ike iji gboo mkpa ndị ahịa. Maka ndị nrụpụta buru ibu nke megoro nnukwu ọkwa, otu esi arapara na onwe ha ma duru mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ abụrụla isi. Dika ihe ahia choro na agbanwe, ihe ndi choro maka oru na oru ha na-abukwa ndi okacha amara na ndi di elu.
Usoro nke ngwaahịa ndị dị ka igwe CNC EDM, CNC punching machine, CNC waya cutting machine, machining center na ngwaahịa ndị ọzọ nke Dongguan Bica na-ere mgbe niile na-apụta n'ahịa n'ihi uru nke ọtụtụ ọrụ na arụmọrụ dị elu. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhazigharị ụlọ ọrụ. Dị ka a space akara (CNC) ígwè na akụrụngwa enterprise, Dongguan City BiGa ji kpachie oghere Machinery CO., LTD. ga-adabere na ikike ụlọ ọrụ siri ike nyocha na ike mmepe na ike teknụzụ iji gbasaa ohere karịa n'ahịa.
Gantry Mkpa egweri igwe, Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Double-End Mkpa egweri Machine, Gantry Type Mkpa egweri igwe, Gantry Single Head Mkpa egweri Machine,